ထွက်မြောက်ရာ7(Myanmar/Burmese: Judson (1835)); Arcana Coelestia (Elliott translation) # 7277České uživatelské rozhraní
1 ထာဝရဘုရားဘုရားကလည်း၊ သို့ဖြစ်၍ သင့်ကို ဖါရောဘုရင်၏ ဘုရားဘုရားအရာ၌ ငါခန့်ထား၏။ သင်၏အစ်ကိုအစ်ကို အာရုန်သည်အာရုန်သည်၊ သင်၏ပရောဖက် ဖြစ်ရလိမ့်မည်။
2 ငါမိန့်တော်မူသမျှတို့ကကို သင်သည် ပြန်ပြောရမည်။ ဖါရောဘုရင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားသားတို့ကကို မိမိပြည်ပြည်မှလွှတ်လိုကက်ရမည်အကကြောင်းကကို၊ သင်၏အစ်ကိုအစ်ကို အာရုန်သည်အာရုန်သည် သူ့ထံ၌လျှောကက်ရမည်။
3 ငါသည်လည်း ဖါရောမင်း၏ နှလုံးနှလုံးကို ခိုင်မာစေ၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌အဲဂုတ္တုပြည်၌ ငါ၏နိမိတ်လက္ခဏာ အံ့ဘွယ်သော အမှုတို့ကို များပြားစေမည်။
4 သို့သော်လည်း ဖါရောမင်းသည် သင်တို့စကားကို နားမထောင်နားမထောင်ဘဲနေလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း ငါ့လက်လက် ကို အဲဂုတ္တုပြည်ပြည်အပေါ်မှာတင်၍ ကြီးစွာသောဒဏ်ခတ်ခြင်းအားဖြင့် ငါ၏ဗိုလ်ပါများ၊ ငါ၏လူဣသရလ အမျိုးသားသားတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်ပြည်မှနှုတ်ဆောင်မည်။
5 ထိုသိသို့အဲဂုတ္တုပြည်အပေါ်မှာ ငါ့လက်လက်ကိုဆန့်၍၊ ဣသရေလအမျိုးသားသားတို့ကို သူတို့အထဲမှ နုတ်ဆောင် သောအခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘုရားဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို အဲဂုတ္တုလူတို့သည်အဲဂုတ္တုလူတို့သည် သိသိကြလိမ့်မည်ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူ၏။
6 မောရှေနှင့်အာရုန်တို့သည် ထာဝရဘုရားဘုရား မိန့်တော်မူသမျှ အတိုင်းပြုကကြ၏။
7 ဖါရောဘုရင်ထံ၌ လျှောက်ကြသောအခါ၊ မောရှေ၏အသက်သည် အနှစ်ရှစ်ဆယ်ရှစ်ဆယ်ရှိ၏။ အာရုန်၏အာရုန်၏ အသက်သည် အနှစ်ရှစ်ဆယ်သုံးဆယ်သုံးနှစ်ရှိ၏။
8 တဖန်ထာဝရဘုရားဘုရားသည် မောရှေနှင့်အာရုန်တို့အား မိန့်တော်မူသည်ကား၊
9 ဖါရောဘုရင်က၊ သင်တို့အတွက် ထူးဆန်းသော တန်ခိုးကို ပြပြလော့ဟုဆိုလျှင်၊ သင်၏ လှံတံလှံတံကိုယူ၍ ရှေ့တော်၌ချလော့ဟု အာရုန်အားပြပြောလော့။ လှံတံလှံတံသည်လည်း မြွေဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
10 မောရှနှင့်အာရုန်သည်အာရုန်သည် ဖါရောဘုရင်ထံသို့ဝင်ဝင်၍ ထာဝရဘုရားဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်းပြုသဖြင့်၊ အာရုန်သည်အာရုန်သည် ဖါရောဘုရင်ရှေ့၊ သူ၏ကျွန်ကျွန်များရှေ့မှာရှေ့မှာ လှံတံလှံတံကကိုချ၍ မြွေဖြစ်လေ၏။
11 ထိုအခါ ဖါရောဘုရင်သည် ပညာရှိများ၊ ပြုစားတတ်သောသူများတို့ကိုခေါ်ကိုခေါ်၍၊ အဲဂုတ္တုအမျိုး ဝိဇ္ဇာဆရာ တို့သည်၊ ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့် ထိုအကူပြု၍၊
12 မိမိတို့ကိုင်သော လှံတံလှံတံများကိုချ၍ မြွေဖြစ်ကြလေ၏။ သို့သော်လည်း အာရုန်၏အာရုန်၏လှံတံလှံတံသည် သူတို့၏ လှံတံလှံတံများကို မျိုမျိုလေ၏။
13 ထာဝရဘုရားဘုရား မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဖါရောဘုရင်သည် နှလုံးနှလုံးခိုင်မာ၍ သူတို့၏စကားစကားကို နား မထောင်ဘဲနေ၏။
14 ထာဝရဘုရားဘုရားကလည်း၊ ဖါရောဘုရင်သည် နှလုံးနှလုံးခိုင်မာ၍ ဣသရေလလူတို့ကို မလွှတ်ဘဲနေ၏။
15 နံနက်နံနက်အချိန်၌ ဖါရေရောဘုရင်ထံသို့ သွားလော့။ သူသည် ရေရေဆိပ်သို့ သွားလိမ့်မည်။ သူမရေရောက်မှီ သင် သည် မြစ်ကမ်းနားမှာ ရပ်နေလော့။ မြွေမြွေဖြစ်သော လှံတံလှံတံကိုလည်း လက်လက်တွင်ကိုင်လော့။
16 ဟေဗြဲဟေဗြဲအမျိုးသားတို့၏ ဘုရားသခဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဘုရားက၊ ငါ့လူတို့သည်တော၌ ငါ့အား ဝတ်ပြုမည် အကြောင်း၊ သူတို့ကိုလွှတ်လော့ဟု အမိန့်တော်ပါသော ကျွန်ုပ်ကို ကိုယ်တော်ထံသို့ စေလွှတ်တော်မူပြီ။ ကိုယ်တော်သည် ယခုတိုင်အောင် နားမထောင်နားမထောင်ဘဲနေပါသည် တကား။
17 ထာဝရဘုရားဘုရားက၊ ငါသည် ထာဝရဘုရားဘုရား ဖြစ်ကြောင်းကို သင်သည်အဘယ်သိသို့ သိသိရမည်နည်းဟူမူကား၊ ငါကိုင်သောလှံတံလှံတံနှင့် မြစ်ရေကိုရေကိုရိုက်၍ ထိုရေရေသည် အသွေးသွေးဖြစ်လိမ့်မည်။
18 မြစ်၌ရှိသော ငါးတို့သည်သေကြလိမ့်မည်။ မြစ်ရေရေလည်းနံလိမ့်မည်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့သည်အဲဂုတ္တုလူတို့သည်လည်း မြစ်ရေရေ ကို ရွံကြလိမ့်မည် အကြောင်းကို ပြန်ပြောလော့ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူ၏။
19 တဖန် ထာဝရဘုရားဘုရားသည် မောရှေကိုမိန့်တော်မူပြန်သည်ကား၊ အာရုန်အား သင်၏လှံတံလှံတံကိုယူ၍ အဲဂုတ္တုပြည်၌အဲဂုတ္တုပြည်၌ရှိသော ချောင်းရေရေ၊ မြစ်မြစ်ရေရေ၊ အိုင်အင်းရေရေ၊ ကန်ရေရေ၊ တွင်းရေရေရှိသမျှအပေါ်မှာ လက်လက်ကိုဆန့်လော့။ ထိုရေရေရှိသမျှတို့သည် အသွေးသွေးဖြစ်လိမ့်မည်။ အဲဂုတ္တုပြည်ပြည် တရှောက်လုံး၊ သစ်ခွက်၊ ကျောက်အိုး၌မျှ မကြွင်း အသွေးသွေး ရှိလိမ့်မည်အကြောင်းကို ပြောလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
20 မောရှေနှင့် အာရုန်သည်အာရုန်သည် ထာဝရဘုရားဘုရား မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ပြု၍၊ အာရုန်သည်အာရုန်သည် ဖါရေရောဘုရင် ရှေ့၊ သူ၏ကျွန်ကျွန်များရှေ့မှာ လှံတံလှံတံကကိုချီ၍ မြစ်ရေကိုရေကို ရိုကက်သဖြင့်၊ မြစ်ရေရေရှိသမျှသည် အသွေးသွေးဖြစ်လေ၏။
21 မြစ်၌ရှိသော ငါးတို့သည်လည်း သေကြ၍၊ မြစ်ရေရေနံသောကြောင့်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့သည်အဲဂုတ္တုလူတို့သည် မြစ်ရေကိုရေကို မသောက်နိုင်ကြ။ အဲဂုတ္တုပြည်ပြည်တရှောက်လုံး၌ အသွေးသွေးနှံ့ပြားလျက် ရှိလေ၏။
22 အဲဂုတ္တုအမျိုးသား ဝိဇ္ဇာဆရာတို့လည်း ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့် ထိုအတူပြုကြ၏။ ထာဝရဘုရားဘုရား မိန့် တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဖါရောဘုရင်သည် နှလုံးနှလုံးခိုင်မာ၍ သူတို့၏စကားစကားကို နားမထောင်နားမထောင်ဘဲနေ၏။
23 နန်းတော်သို့လှည့်လည်ပြန်သွား၍ ထိုအမှုကို နှလုံးနှလုံးမသွင်းဘဲ နေလေ၏။
24 ထိုအခါ အဲဂုတ္တုလူတို့သည်အဲဂုတ္တုလူတို့သည် မြစ်ရေကိုရေကို မသောက်နိုင်သောကြောင့်၊ သောက်ရေကိုရေကိုရခြင်းငှါ မြစ်နားမှာ တွင်းတူးတူးကြ၏။
25 ထာဝရဘုရားဘုရားသည် မြစ်ကိုဒဏ်ခတ်ဒဏ်ခတ်၍ ခုနစ်ရက်ကို လွန်စေတော်မူ၏။
ကမ္ဘာ ဦး 41:8
ထွက်မြောက်ရာ 3:19, 20, 4:3, 9, 15, 16, 21, 23, 5:1, 6:6, 7, 26, 29, 7:6, 10, 11, 13, 20, 22, 8:3, 11, 28, 9:7, 20, 21, 34, 35, 10:1, 12:28, 17:5
တရားဟောရာကျမ်း 2:30, 31:2
၁ ဓမ္မရာဇဝင် 6:6
၄ ဓမ္မရာဇဝင် 19:19
၂ ရာချုပ် 36:13
ဆာလံ 78:12, 44, 105:27, 29
သုတ္တံကျမ်း 21:1, 28:14
ဟေရှာယ 19:8, 47:7
၂ သက် 2:9
၂ တိမောသေ 3:8
ဗျာဒိတ်ကျမ်း 8:8, 21:8
Arcana Coelestia # 7277
7277. 'And will lead My army, My people, the children of Israel' means that those among whom forms of good and truths are present are to be delivered. This is clear from the meaning of 'leading out' as delivering; from the meaning of 'army' as all kinds of good within truths, dealt with in 7236, thus those among whom forms of good, and truths from these, are present; from the meaning of 'people' as that which has reference to those in whom spiritual good and truth are present, dealt with in 1259, 1260, 3295, 3581, 4619, thus those who belong to the spiritual Church, 2928, 7207; and from the representation of 'the children of Israel' as those who belong to the spiritual Church, dealt with above in 7271, thus those in whom forms of good and truths are present.
(Odkazy: Arcana Coelestia 1259-1260; Exodus 7:4)
Arcana Coelestia 7282
Apocalypse Explained 72